djia အညွှန်းကိန်းအနာဂတ်မော်ကွန်း - အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing
tag - djia-အညွှန်းကိန်း-အနာဂတ်
အဆိုပါ DJIA ညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်ရေးထိပ်တန်း 10 အကြောင်းရင်းများ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2018
CFD လမ်းညွှန် Uncategorized
binary options များနှင့်အတူကျော် Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှအတွက်ကုန်သွယ်တိုက်ရိုက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထက် သာ. ကောင်း၏အဘယ်ကြောင့်အပေါ်ဝါရင့်စျေးကွက်ကုန်သည်များထံမှဝိပဿနာ။ အဆိုပါ DJIA ညွှန်းကိန်း 10 ကုန်သွယ်ရေးထိပ်တန်း 1 အကြောင်းရင်းများ) Binary ရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပုံမှန် DJIA အပေါ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထက် ပို. ဆက်ကပ်။ သူတို့ပူဇော်ရသောအရာတစ်ခုမှာ [ ... ] သင်သည်မကျင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ